Somalia:Xukuumadda oo dhalleeceysay falkii argagixiso ee ka dhacay Magaalada Gaalkacyo (War Saxaafadeed) | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > POLITICS, PUNTLAND, TFG Somalia	> Somalia:Xukuumadda oo dhalleeceysay falkii argagixiso ee ka dhacay Magaalada Gaalkacyo (War Saxaafadeed)
Saturday, April 23, 2011 Laaska News
(Muqdisho, April21,2011) Dowladda Fadaraalka ah ee Soomaaliaya waxay si adag udhalleecaynaysaa falkii argagixisada ahaa ee 16kii bishan Abril ka dhacay magaalada Gaalkacyo,qaraxaas oo loo adeegsaday baabuur isla markaana lagu dilay Agaasimihii WasaaraddaCaddaaladda ee gobalka Mudug.
Sidoo kale waxay Dolwladda Soomaaliya dhalleecaynaysaa falkii fuleynimada ahaa ee laguweeraray dad ku tukanayey Misaajid ku yaalla isla magaalada Gaalkacyo bishan Abril 16keediisanadka 2011. Weerarkaas oo lagu galaaftay nolasha afar qof oo aan waxba galabsan islamarkaana lagu dhaawacay toban kale.
Dowladda Soomaaliya waxay ku dhiirra-galinaysaa dadka deegaanka inay ilaashadaan nabaddaisla markaa u ololeeyaan nabadda, iska jiraan, kana hortagaan kuwa damacsan inay qalalaase kaabuuraan Gobalka.
Sidoo kale waxay Dowladda Soomaaliya ku dhiirro galinaysaa maamulka Puntland inay dambiilayaashii falkan naxdinta leh gaystay ay hor keenaan sharciga.
Ugu danbeyn Dowladda Soomaaliaya waxay tacsi u diraysaa qoysaskii iyo qaraabadii ay dadkuka dhinteen.
Somalia:Guddiga Warfaafinta Barlamanka oo cambaareyay ciidamada ku sugan xeebaha dalka Japan:TEPCO to cautiously inject water in No.4 fuel pool